Siyaasaddeenu waxay socotaa 30 maalmood. Haddii 30 maalmood ay ka soo wareegtay wixii aad iibsatay, nasiib darro, kuma siin karno wax lacag celin ah ama beddelaad ah.
Ma bixinayno lacag celin wixii rar ah ee aan la raacin.
Noocyada noocyada kala duwan ah ayaa ka reeban in la soo celiyo. Alaabada la jari karo sida cuntada, ubaxa, wargeysyada ama majaladaha lama soo celin karo. Sidoo kale ma aqbalno badeecooyin udub dhexaad ah ama alaabo nadiif ah, maaddooyinka halista ah, ama dareeraha ololi kara ama gaasaska.
Ma aqbalno shay kasta oo aan ku jirin xaaladdiisii ​​hore oo waxyeello soo gaadhay ama qaybo ka maqnaa sababo aan khaladkeenna ahayn ama shey kasta oo la soo celiyey in ka badan 30 maalmood ka dib dhalmada
Haddii aad sidaan oo dhan sameysay oo aadan wali helin lacagtii lagaa rabay, fadlan nagala soo xiriir [emailka waa la ilaaliyay]
Kaliya waxyaabaha caadiga ah ee qiimaha lagu soo iibsado dib ayaa loo soo celin karaa, nasiib daro, waxyaabaha iibka lama soo celin karo.
Kaliya waxaan bedeleynaa waxyaabaha hadii ay cillad ama dhaawacan yihiin. Haddii aad u baahan tahay inaad ku beddelato isla shay, noo soo dir e-mayl ah at [emailka waa la ilaaliyay] wixii fariimo dheeraad ah.
Si aad u soo celiso badeecadaada, emayl ugu dir [emailka waa la ilaaliyay] wixii fariimo dheeraad ah.
Haddii aad alaab ka rareyso wax ka badan EUR 75, waa inaad tixgelisaa adeegsiga adeegga maraakiibta la raaci karo ama iibsashada caymiska maraakiibta. Annagu dammaanad kama qaadaynno inaan heli doonno shaygaaga la soo celiyey.